ညွှန်ကြားချက်များမော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
LEGO သတင်းများ၊ သုံးသပ်ချက်များနှင့်တည်ဆောက်မှုများ
ထိပ်တန်း 20 သတ်မှတ်ချက်များ
Lego BrickHeadz အသစ်တစ်ခုကိုအားလပ်ရက်ဆင်နွှဲရန်သတ်မှတ်ထားသည်
15 / 07 / 2021 15 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 291 Views စာ0မှတ်ချက် 40492, La Catrina, BrickHeadz, ဆောက်လုပ်ရေးညွှန်ကြားချက်များ, သေလွန်သောနေ့, DIA က de los Muertos, ညွှန်ကြားချက်များ, la Catrina, Lego, Lego BrickHeadz, Lego ညွှန်ကြားချက်, မက္ကစီကို
အသစ် LEGO BrickHeadz တည်ဆောက်မှုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုအားလပ်ရက်အားကျင်းပသည့်ပထမဆုံးနေ့ဖြစ်သောနေ့ဖြစ်သည်
သေးသေးလေးတည်ဆောက်ပါ LEGO artHubble အာကာသတယ်လီစကုပ်ပုံရိပ်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းအလုပ်
25 / 04 / 2021 25 / 04 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 684 Views စာ0မှတ်ချက် artအလုပ်, Hubble အာကာသတယ်လီစကုပ်, ညွှန်ကြားချက်များ, Lego, Lego နာဆာ, mosaic, ဖန်ဆင်းခြင်းတိုင်များ
၏ပိုကြီးတဲ့ဗားရှင်းပါ LEGO Group's Out-of-this- ကမ္ဘာကြီးကို artအလုပ်သည်ထပ်မံဖန်တီးရန်ခက်ခဲလွန်းပုံရသည်။ ထို့နောက်စိတ်ပူစရာမလိုပါ
LEGO တကယ်က၎င်း၏တိုင်းတာအပေါ်တစ် ဦး လက်ကိုင်ရရန်လိုအပ်သည်
24 / 04 / 2021 24 / 04 / 2021 ခရစ် Wharfe 3291 Views စာ0မှတ်ချက် 10283 NASA အာကာသလွန်းပျံယာဉ် Discovery, ဆောက်လုပ်ရေးညွှန်ကြားချက်များ, ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု, ညွှန်ကြားချက်များ, Lego, Lego နာဆာ, LEGO.com, နာဆာ, အာကာသလွန်းပျံယာဉ်, အာကာသလွန်းပျံယာဉ် Discovery, အဆိုပါ LEGO Group, တွစ်တာ
အာကာသလွန်းပျံယာဉ် Discovery သည်၎င်း၏မစ်ရှင် ၃၉ ခုတွင် ၂၃၈ ကီလိုမီတာမိုင်ပေါင်းများစွာပျံသန်းနိုင်ကြောင်းသင်သိပါသလား။ ဒါကဘာလဲ
LEGO NASA Ulysses Space Probe VIP ဆုအတွက်လမ်းညွှန်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
17 / 04 / 2021 17 / 04 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 643 Views စာ0မှတ်ချက် 10283 LEGO NASA အာကာသလွန်းပျံယာဉ် Discovery, ၆၃၇၃၆၀၃ NASA NASA Ulysses Space Probe, အုတ်ဖို, ညွှန်ကြားချက်များ, Lego, Lego နာဆာ, Lego VIP, Lego VIP ဆုလာဘ်များ, နာဆာ, NASA Ulysses အာကာသလေ့လာရေး, Ulysses အာကာသစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး, VIP ဆုများ, VIP ဆုပေးစင်တာ
အကယ်၍ သင် LEGO NASA Ulysses Space Probe VIP ဆုကိုမိတ္တူတစ်ခုယူရန်မအောင်မြင်ပါကညွှန်ကြားချက်များ
အခြားတည်ဆောက်စရာများဖြင့်အခြားမောက်စ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ပါ LEGO Art 31202 DisneyMickey မောက်စ်
10 / 04 / 2021 10 / 04 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 945 Views စာ0မှတ်ချက် 31202 DisneyMickey မောက်စ်, အခြားတည်ဆောက်, art, daisy, Daisy ဘဲ, Disney, Donald, Donald ဘဲ, ရယ်မိုက်, ညွှန်ကြားချက်များ, Lego, LEGO art, Lego Disney, LEGO.com, ကို Mickey, မစ်ကီမောက်စ်, Minnie, Minnie Mouse, mosaic, ကြွက်
အဆိုပါ LEGO Group များအတွက်အခြားညွှန်ကြားချက်များအစုတခုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် LEGO Art 31202 DisneyMickey Mouse ကနောက်ထပ် option တစ်ခုပေးသည်
09 / 03 / 2021 09 / 03 / 2021 ခရစ် Wharfe 771 Views စာ0မှတ်ချက် ၂၁၃၂၆ Winnie the Pooh, ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု, Ideas, ညွှန်ကြားချက်များ, Lego, Lego သံအမတ်ကွန်ယက်, Lego Ideas, အဆိုပါ LEGO Group
အဆိုပါ LEGO Groupအဆောက်အ ဦး ညွှန်ကြားချက်များအဖွဲ့သည်အစောပိုင်းမှတ်ချက်များအားကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အနက်ရောင်နောက်ခံများကိုအသုံးပြုခြင်းမှရွေ့လျားနေသည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်
02 / 03 / 2021 02 / 03 / 2021 ခရစ် Wharfe 732 Views စာ0မှတ်ချက် 10277 မိကျောင်းစက်ခေါင်း, 75275 A- တောင်ပံ Starfighter, ဆောက်လုပ်ရေးညွှန်ကြားချက်များ, Creator Expert, Facebook က, ညွှန်ကြားချက်များ, Lego, Star Wars, အဆိုပါ LEGO Group
အဆိုပါ LEGO Group ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အနက်ရောင်နောက်ခံများမှညွှန်ကြားချက်လက်စွဲများမှ“ ရွေ့လျားရန်” စီစဉ်နေသည်
LEGO ဒီဇိုင်နာသည်နှစ် ၂၀ မြောက် BIONICLE အခမ်းအနားကိုပြုလုပ်သည်
03 / 01 / 2021 04 / 01 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 1136 Views စာ0မှတ်ချက် ဘိုင်အို, တည်ဆောက်, ညွှန်ကြားချက်များ, Lego, Lego BIONICLE, Lego ဒီဇိုင်နာ, Lego MOC, စကခ, Niek van Slagmaat, ရောဘတ်စက်ရုပ်, တွစ်တာ
LEGO Bionicle သည်၎င်း၏နှစ် ၂၀ မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုကျင်းပနေပြီး LEGO ဒီဇိုင်နာ LEGO Bionicle သည်ယခု ၂၀ ကျော်ပါဝင်သည်။
LEGO Build to Give သင်ခန်းစာသည်တိရိစ္ဆာန်များမည်သို့တည်ဆောက်ရမည်ကိုပြသည်
19 / 11 / 2020 19 / 11 / 2020 ဂရေဟမ် 663 Views စာ0မှတ်ချက် ပေးဆပ်ရန်တည်ဆောက်ပါ, မေတ္တာ, ညွှန်ကြားချက်များ, Lego, YouTube ကို
ပထမ ဦး ဆုံး LEGO Build to Give ကို livestreamed သင်ခန်းစာတွင် Master Model တည်ဆောက်သူနှစ် ဦး သည်အုတ်များကိုအတူတကွထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်များမျှဝေထားကြသည်
Brick Fanatics သတင်းလွှာ
ဆက်သွယ်ပါ Brick Fanatics at [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
Tiro Media Ltd မှ
မူပိုင်ခွင့်© 2021 Brick Fanatics.All rights reserved.
အဓိကအကြောင်းအရာ - ColorMag Pro မှဖြစ်သည် ThemeGrill။ မှပံ့ပိုးသည် WordPress.
theme: ColorMag Pro ကို ThemeGrill ကဖြစ်သည်။ မှပံ့ပိုးသည် WordPress.